Ra’iisul Wasaare Rooble oo booqanaya dhammaan deegaanada ay ka dhaceyso doorashooyinka. | Warbaahinta Ayaamaha
Ra’iisul Wasaare Rooble oo booqanaya dhammaan deegaanada ay ka dhaceyso doorashooyinka.
MUQDISHO-AYAAMAHA-Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa sheegay inuu safaro ku tagayo dhammaan deegaanada ay ka dhaceyso doorashooyinka, isagoo caddeeyay in Dowlad Goboleedka Jubbaland ay mas’uul ka tahay doorashada ka dhaceyso Kismaayo iyo Garbahaarey, isagana uu ku kormeerayo kulana xisaabtamayo hirgelinta arrimaha doorashada.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa ka hor inta uusan ka ambabaxin magaalada Kismaayo waxaa uu kormeeray goobta magaalada Kismaayo looga diyaariyay inay ka dhacdo doorashada labada Aqal, isaga oo kulan dardaaran ahaa la qaatay Guddiga doorashooyinka Jubbaland.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha oo hadlay ayaa sheegay in dhamaan uu booqan doono xarumaha loo asteeyay inay ka dhacaan doorashooyinka, sida, Boosaaso, Garoowe, Dhuusamareeb, Gaalkacyo, Baraawe, Baydhabo,Jowhar iyo Beledweyne.
Rooble ayaa masuulmka ah amniga iyo howlaha doorashooyinka sida lagu qoran heshiis ka dhacay Muqdisho, waana arrin Bulshadda ay ku farxaysa maadaamaa ay jirto cabasho ku saabin soo xulista xildhibaanada.